Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ)
Hello Sayarwon » အဆုတ်ကင်ဆာ » Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ)
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အဆုတ်ရောဂါသည် အသက်ရှုခြင်းကို လုပ်ဆောင်သော အင်္ဂါဖြစ်သည့် အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေသော ရောဂါများကို ဆိုလိုသည်။ အဆုတ်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်သော အသက်ရှူခက်ခဲခြင်းပြသနာများသည် ခန္ဓါကိုယ်ကို အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာမရခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ အဆုတ်ရောဂါများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
-ရင်ကြပ်ရောဂါ၊ နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အဆုတ်ထဲရှိ လေအိတ်ငယ်လေးများ ပျက်စီးခြင်း၊
-တုပ်ကွေး နှင့် နမိုးနီးယားကဲ့သို့သောရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
-Sarcoidosis and pulmonary fibrosis
အဆုတ်သည် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ရှူသွင်းရှူထုတ်နိုင်ရန် တစ်နေ့လျင် အကြိမ်များစွာ ဆန့်လိုက်၊ လျော့လိုက်လုပ်ရသည့် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါဝင်သော အဂါၤတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆုတ်ရောဂါသည် အထက်ပါ အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုခု ပျက်စီးလျင် ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆုတ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖြစ်အများဆုံးသော ရောဂါများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဆုတ်ရောဂါ သည် အလွန် အဖြစ်များပါသည်။ ၎င်းသည် အသက်အရွယ်မရွေးတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ချေကို များစေနိုင်သော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများသည် ဖြစ်နေသော အဆုတ်ရောဂါပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။ အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ
-ချောင်းဆိုးသည့်အခါ သွေးနှင့်အချွဲများ ပါခြင်း
-အသက်ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်သည့်အခါ နာကျင်ခြင်း၊ မသက်မသာဖြစ်ခြင်း
-ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူသည့်အခါ တရွှီရွှီမြည်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်ထဲတွင် တင်းကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း။
နာတာရှည် လေလမ်းကြောင်းပိတ်သော အဆုတ်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများမှာ
-ချောင်းဆက်တိုက်ဆိုးပြီး အချွဲများစွာ ပါခြင်း
-လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အချိန်တွင် အထူးသဖြင့် အသက်ရှူရခက်ခြင်း
-ချောင်းဆိုးခြင်းသည် သက်သာမသွားပဲ ပိုဆိုးလာခြင်း
-နမိုးနီးယားရောဂါသည် သက်သာမသွားပဲ ပိုဆိုးလာခြင်း
-အစားစာချင်စိတ်ပျက်ခြင်း၊ အကြောင်းရင်းမရှိပဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း။
အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်သည်။ သင့်တွင် စိတ်ပူပန်နေသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင့်တွင် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုရှိလျင် သို့မဟုတ် မေးမြန်းလိုသည်များရှိလျင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်သည် တုံ့ပြန်မှုမတူညီတတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လူအချို့တွင် အဘယ်ကြောင့် ရင်ကြပ်ရောဂါဖြစ်ရသည်ကို သေချာစွာ မသိကြရပေ။ သို့သော် ၎င်းသည် ပတ်ဝန်ကျင်မှ အကြောင်းအချက်များနှင့် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ အချက်များ ပေါင်း၍ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အရာများကို ထိတွေ့သည့်အခါ ရင်ကြပ်ရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ ရင်ကြပ်ရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော အကြောင်းရင်းများတွင် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးမတူညီကြပါ။ ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
-လေထဲမှ ပြန့်နှံ့ပါလာသော ပန်းဝတ်မှုန်များ၊ ဖုန်များ၊ အမှိုက်စများ၊ ပိုးမွှားများ၊ မှိုများ၊ နှင့် အခြားသော အညစ်အကြေးများ
-မီးခိုးကဲ့သို့သော လေထဲမှ အညစ်အကြေးများ
-အချို့သော ဆေးဝါးများ (beta blockers, aspirin, ibuprofen နှင့် naproxen) စသော ဆေးဝါးများ
-အစားအစာများတွင် ထည့်သွင်းထားသော တာရှည်ခံဆေးများ၊ ဥပမာ ပုစွန်ခြောက်၊ သစ်သီးခြောက်၊ အားလူးကြော်၊ ဘီယာနှင့် ဝိုင်
-အစာအိမ်ထဲမှ အက်ဆစ်ဓါတ်များ လည်ချောင်းထဲသို့ ပြန်တက်သော ရောဂါ Gastrooesophageal reflux disease (GERD)
နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့် ရောဂါကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများ
-ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အခြားသော ထိခိုက်စေသော အရာများ။ ။ အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေပြီး နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့် ရောဂါကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းမှာ ဆေးလိပ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာသောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြားသော မျိုးရိုးဗီဇကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများလည်း ရှိပါသေးသည်။ အခြားသော အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အရာများမှာ ဆေးရွက်ကြီးသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို တပါးသူထံမှ ရှူရှိုက်ရခြင်း၊ ပြောင်းနှင့် ဆေးရှူခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ နှင့် အလုပ်မှရသော ဖုန်၊ မီးခိုးငွေ့နှင့် အခြားသော ဓါတ်ငွေ့များ ပါဝင်သည်။
-Alpha 1 antitrypsin မရှိခြင်း။ ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သော လူများထဲမှ တစ်ရာခိုင်နှုန်းသည် မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါဖြစ်သော အဆုတ်ကို ကာကွယ်သည့် alpha 1 antitrypsin ပရိုတင်းချို့တဲ့ကြသည်။ အဆုတ်ကို ထိခိုက်ခြင်းသည် ဆေးလိပ်သောက်သော လူကြီးများတွင် သာမကပဲ မွေးကင်းစကလေးများနှင့် ကလေးကြီးများတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Alpha 1 antitrypsin ချို့တဲ့သော ရောဂါရှိသော လူများတွင် ကုသမှုသည် အခြားသောလူများနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သ်ည။ ထို့အပြင် ချို့တဲ့နေသော ပရိုတင်းကို အစားထိုးပေးခြင်းဖြင့်လည်း ကုသနိုင်သည်။
အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ရသော အကြောင်းရင်းများ
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ရသော အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်သောသူနှင့် ကိုယ်တိုင်မသောက်သော်လည်း တခြားသူထံမှ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရသောသူ နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အဆုတ်ကင်ဆာသည် ဆေးလိပ်လုံးဝမသောက်သော သူများနှင့် ဆေးလိပ်ငွေ့ကို လုံးဝမရှူဖူးသောလူများတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောလူနာများတွင် အကြောင်းရင်းကို သေချာစွာ မသိရပေ။
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရင်ကြပ်ရောဂါကို ပိုဖြစ်နိုင်စေသော အကြောင်းရင်းများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
-သွေးသားတော်စပ်သော သူများတွင် ရင်ကြပ်ရောဂါရှိခြင်း။
-အခြားသော ဓါတ်မတည့်သည့် အခြေအနေများရှိခြင်း၊ ဥပမာ atopic dermatitis or allergic rhinitis (hay fever)
-သူတပါးထံမှ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်ရခြင်း၊
–အခြားသော ဓါတ်ငွေ့များနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ရှိခြင်း
-အလုပ်မှ ဓါတုဓါတ်ငွေ့များ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဆံပင်ဖြန်းဆေးများ၊ နှင့် ထုတ်ကုန်များမှ အငွေ့များ ရှူရှိုကိရခြင်း။
နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သော ရောဂါ၏ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေများစေသော အကြောင်းရင်းများမှာ
-ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်ရခြင်း။ ။ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်သည့် အချိန်ကြာလာလေလေ၊ ဖြစ်နိုင်ချေ များလေလေဖြစ်သည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့် သောက်ခြင်းဖြစ်စေ ဆေးလိပ်ငွေ့သည် ဖြစ်နိုင်ချေကို များစေသည်။
-ဆေးလိပ်သောက်ပြီး ရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူ။ ။ ရင်ကြပ်ရောဂါ ရှိခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများ စုပေါင်းလျင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့် ရောဂါကို ပို၍ဖြစ်နိုင်ချေများစေသည်။
-အလုပ်မှ ဖုန်နှင့် ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ရခြင်း။
–အသက်အရွယ်။ ။ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့်ရောဂါသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဖြစ်ပွားသည်။ အချို့သော လူများတွင် ရောဂါလက္ခဏာစတင်ပြချိန်သည် အသက် ၄၀ ခန့်လောက်တွင်ဖြစ်သည်။
-မျိုးရိုးဗီဇ။ ။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်သော အဆုတ်ကို ကာကွယ်သည့် ပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်သော Alpha 1 antitrypsin ချို့တဲ့ခြင်းသည် လည်း အဆုတ်ရောဂါ၏ ဖြစ်ပွားစေသော အကြောင်းရင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အခြားသော မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါများလည်း ရှိသေးသည်။
အဆုတ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
-အခြားသူထံမှ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်ရခြင်း။
-Radon ဓါတ်ငွေ့ရှူရှိုက်မိခြင်း၊ Radon ဓါတ်ငွေ့သည် မြေကြီး၊ ကျောက်ဆောင်နှင့် ရေထဲမှ ယူရေနီယမ်များပြိုကွဲသည့် အခါ၊ ထွက်လာပြီး သင်အသက်ရှူသည့်အခါ ပါသွားတတ်သည်။ Radon ကို စစ်ဆေးသော ကိရိယာကို အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များတွင် ဝယ်ရနိုင်သည်။ တိုင်းတာကြည့်ပြီး ပမာဏများနေလျင် ကုသမှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။
-ကင်ဆာကို ဖြစ်စေသော ဓါတ်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (asbestos and other carcinogens, arsenic, chromium and nickel)
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရင်ကြပ်ရောဂါကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်သည် သင့်ကို ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် သင်၏ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို
မေးမြန်းပြီး ကိုယ်ကာယစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ရောဂါကိုသိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်မှ အောက်ပါစစ်ဆေးချက်များကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
-Spirometry။ ။ ဆရာဝန်သည် Spirometer ဟုခေါ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်တစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီး သင် မည်မျှ လေကိုရှူသွင်း ရှူထုတ်နိုင်သည်ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဆရာဝန်မှဆေးပေးပြီးနောက် သင့်ရလဒ်များ တိုးတက်လာသည်ကိုသိနိုင်ရန် ထပ်မံစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
-Bronchoprovocation။ ။ အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးရန် Spirometry ကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ကို ဖိအားပေး၍တိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ် သို့မဟုတ် လေအများကြီး ရှူသွင်းပြီးသည့်နောက်တွင် တိုင်းတာနိုင်သည်။
-Chest Xray သို့မဟုတ် EKG (electrocardiogram)။ ။ ထိုစစ်ဆေးချက်များသည် အခြားသော ရောဂါ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု တစ်ခုခု ကြောင့် လက္ခဏာများပေါ်နိုင်သည့်အတွက် စစ်ဆေးကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
–အခြားသော စစ်ဆေးမှုများ။ ။ ဆရာဝန်မှ အခြားသော အကြောင်းရင်းများသည်လည်း ဤရောဂါ လက္ခဏာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် အခြားသောစစ်ဆေးချက်များကို ပြုလုပ်လိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုများတွင် အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်ဓါတ်များ အပေါ်သို့ပြန်တက်ခြင်း၊ အသံကြိုးပြသနာများနှင့် အိပ်သညိအခါ အသက်ရှူမဝခြင်းတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့် ရောဂါကို စစ်ဆေးခြင်း။
သင့်ဆရာဝန်မှ ဤရောဂါရှိကြောင်း သိရှိရန် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
-ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ မိသားစုရာဇဝင် ကို မေးမြန်းခြင်း။
-ရောဂါကို ဖြစ်စေသော အခြားသောအကြောင်းရင်းများကို မေးမြန်းခြင်း၊ (ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်း နှင့် အခြားသောဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ စသည်ဖြင့်)
-ကိုယ်ကာယစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သည့်အခါ နားကြပ်ဖြင့် အသက်ရှူသည့်အခါ ကြားရသည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများကို နားထောင်ခြင်း။
အဓိက စစ်ဆေးသည်မှာ Spirometry ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူရန်လိုအပ်ပြီး Spirometer နှင့် ဆက်ထားသောပြွန်တစ်ခုထဲသို့မှုတ်ထုတ်ရမည်။ဤစစ်ဆေးမှု ဖြင့် သင်မည်မျှ လေရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်နိုင်သည်ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ အခြားသော စစ်ဆေးချက်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
-Chest Xray or chest computed tomography (CT scan)။ ရင်ခေါင်းဓါတ်မှန် သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်ရိုက်ကူးခြင်း။ ထိုသို့ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် နှလုံးနှင့် အဆုတ်ကို ဓါတ်ပုံဖြင့်တွေ့ရနိုင်သည်။ ထိုပုံရိပ်များသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်သည့်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများကို ပြနိုင်သည်။ အခြားသောအခြေအနေများဖြစ်သည့် နှလုံးရောဂါကိုလည်း ပြနိုင်သည်။
-သွေးကြောထဲမှ ဓတ်ငွေ့ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း။ ။ သွေးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့်ရောဂါ၏ ပြင်းထန်မှုကိုသိရှိနိုင်ပြီး၊ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေသည်ကိုလည်း သိရှိနိုင်သည်။
အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် အောက်ပါစစ်ဆေးချက်များကို အသုံးပြုရသည်။
-Chest Xray။ ။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ဖြင့် အဆုတ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြီးထွားမှုများကိုသိနိုင်သည်။
Computerized tomography scans။ ။ ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်သည်ပို၍အသုံးတည့်ပြီးကင်ဆာကို အခြားသို့မပျံနှံ့မီ စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်သည်။
-ချောင်းဆိုးသည့်အခါပါလာသော အချွဲများတွင်ကင်ဆာဆဲလ်များ ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်သည်။
-ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းမှ တဆင့် အဆုတ်ထဲသို့ မှန်ပြောင်းထည့်ပြီးကြည့်နိုင်သည်။ အသားစ စစ်ဆေးရန် အတွက်လည်း ယူနိုင်သည်။
-အပ်ဖြင့် အဆုတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းပြီးအသားစ သို့မဟုတအရည်ကို နမူနာအဖြစ်ယူနိုင်သည်။
-ရင်ဘတ်မှခွဲစိတ်ပြီးလည်း အဆုတ်မှအသားစကို ယူနိုင်သည်။
Lung Disease (အဆုတ်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရင်ကြပ်ရောဂါသည်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပြီး၊ ဆေးသောက်ခြင်းဖြင့် သက်သာနိုင်သော်လည်း ကုသပျောက်ကင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ရောဂါလက္ခဏာသက်သာစေရန် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြီး ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သက်သာစေသောဆေးများသုံးပြီး၊ ရင်ကြပ်ရောကို ပိုဆိုးစေမည့် အရာများကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။
-ရင်ကြပ်ရောဂါအတွက် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
-သင်သောက်သည့် ဆေးကို သိထားသင့်သည်။
-ဆေးကို မည်သည့်အချိန်သောက်မည်ကို သိထားသင့်သည်။ ရင်ကြပ်ရောဂါသည် မည်သည့် အချိန်တင် သတိထားစောင့်ကြည့်ရမည်ကိုလည်းသိထားသင့်သည်။
မည်သည့် အချိန်တွင်ု အရေးပေါ်အခန်းသို့သွားသင့်သည်။ ဆိုသည်များကို သိရှိထားရမည်။၏
ရင်ကြပ်ရောဂါ၏ဆေးများသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းများကိုဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် ရင်ကြပ်ရောဂါကိုပျောက်အော် လုပ်သည်။
ရေတာရှည်ဖြစ်သောလူနာများတွင်ဆေးကို နေ့စဉ်သောက်ရသည်။ ၎င်းသည် ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်းတားသည်။ လက္ခဏာများသည် ဖြစ်လျှင် ရုတ်တရက်မြန်ဆန်စွာမသက်သာနိုင်ပေး။ အသုံးပြုသောဆေးများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
-Corticosteroid ရှူဆေးသည် နာတာရှည် လူနာများအတွက်ဖြစ်သည်။ လေလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေသည်။
-Long acting beta 2agonists သည်လည်း corticosteroid နှင့်တွဲပြီးပေးသောရှူဆေးဖြစ်သည်။
-Leukotriene modifiers သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွင် ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေသော သောက်ဆေးဖြစ်သည်။
-Cromolyn and nedocromil သည် ရင်ကြပ်ရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော အရာများကို တုံ့ပြန်မှုကို လှံု့ဆော်သည်။-Theophylline သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပွင့်စေသော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
လျင်မြန်စွာ သက်သာစေသော ဆေးများကို လိုအပ်သောအခါမှသာ အသုံပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင် short acting beta2 agonists and short acting bronchodilators များပါဝင်သည်။ လျင်မြန်စွာသက်သာစေသော ဆေးများသည် မိနစ်ပိုင်းနှင့်ပင် လက္ခဏာများကို သက်သာစေနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း တဝိုက်ရှိ ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေခြင်းဖြင့် သက်သာစေသည်။ ၎င်းတို့ကို ရင်ကြပ်ရောဂါလက္ခဏာများ ဆိုးလာသည့်အခါ တားဆီးနိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။
ရင်ကြပ်ရောဂါကို ပိုဆိုးစေသောအရာများကို ရှောင်ပါ။ ဓါတ်မတည့်သည့်အရာများကို ရှောင်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ကို ဓါတ်မတည့်သ့် ဆေးများရှိလျင် ပြောပြထားပါ။
နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့်ရောဂါကို ကုသခြင်း
အဆုတ်ကိုပျက်စီးစေပြီးလျှင် ပြန်ပြင်၍မရနိုင်ပေ။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အကြောင်းအချက်များကို ရှောင်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါတိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများအနေဖြင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆေးလိပ်ငွေ့၊ ဖုန်ငွေ့၊ မီးခိုးငွေ့ နှင့် အခြားသော အိမ်နှင့် အလုပ်တွင် ထိတွေ့စေနိုင်သော မတည့်သည့် အနံ့များကို ရှောင်ပါ။ အပြင်ဘက်တွင် တွေ့ကြုံနိုင်သော လေထုညစ်ညမ်းခြင်းများကိုလည်း ရှောင်ပါ။ ဆေးကုသခြင်းဖြင့် လက္ခဏာများကို သက်သာစေနိုင်သည်။ အသုံးများသော ဆေးဝါးများမှာ
-အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပွင့်စေသော ဆေးများ
-အဆုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေသော ရှူဆေးများ
-အဆုတ်တွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို သက်သာစေရန်သုံးသော ပိုးသတ်ဆေးများ
နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့် လူနာများကို အောက်ပါဆေးများပေးနိုင်သည်။
-အဆုတ်ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေသော ကုသနည်းများ။ ။ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သည့် ရောဂါရှိသူများသည် ကိုယ်ကာယအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ကုသရန်လိုအပ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ရောဂါကို သက်သာအောင် ပြုလုပ်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အာဟာရ အကြံဉာဏ်များ၊ နှင့် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
-အောက်ဆီဂျင်ပေးခြင်း၊ လူနာကို ပိုက် သို့မဟုတ်၊ မျက်နှာအုပ်သည့် ကိရိယာဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ပေးနိုင်သည်။
-ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။ ။ တခါတရံတွင် ခွဲစိတ်ခြင်းအားဖြင့် လူနာကို သက်သာစေနိုင်သည်။ အဆုတ်ကို အစားထိုးကုသခြင်းလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
တခါတရံတွင် အဆုတ်ကင်ဆာကုသမှုများသည် အဆုတ်ကင်ဆာကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်သည်။ အခြားသော အချိန်တွင် ကုသမှုများသည် ကင်ဆာရောဂါကို ထပ်၍မပျံ့နှံ့ စေရန်နှင့် ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန်ဖြစ်သည်။
သင့်အတွက် ကုသမှုသည် အောက်ပါတို့ပေါ်တွင် မူတည်သည်။
-ကင်ဆာသည် ဘယ်နေရာတွင်ဖြစ်ပြီး အခြားခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့နှံ့နေသည့်အခြေအနေ
သင့်ဆရာဝန်သည် ကုသမှုကိ ုတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေ၊ ကုသမှုများပေါင်း၍ ဖြစ်စေ ပေးနိုင်သည်။
-ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် အဆုတ်၏ ကင်ဆာရှိသော အစိတ်အပိုင်းကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆုတ်၏ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ၊ အားလုံးကို ဖြစ်စေထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
-ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသမှုသည် ကင်ဆာအဖုအကျိတ်ကို ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့စေပြီး ကင်ဆာဆဲလ်များသေစေရန်ဖြစ်သည်။ နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး လူနာကိုလည်း ခံစာရခြင်းများ သက်သာစေသည်။
-ဓါတုဆေးဝါးများပေး၍ ကုသခြင်းသည် ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်နိုင်သည်။ ဆေးများသည် သွေးကြောထဲမှ ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆေးလုံးအနေဖြင့် လည်းကောင်းရှိနိုင်သည်။
အောက်ပါတို့သည် အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါကို သက်သာစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများဖြစ်ကြပါသည်။
-ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ဖြတ်ပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်နည်းလမ်းများကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
-အခြားသူထံမှ ဆေးလိပ်ငွေ့မရစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။
-အိမ်နှင့် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် radon gas ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။
-Asbestos နှင့် ထိတွေ့ခြင်းသည် အဆုတ်ရောဂါကို ပြင်းထန်စေသည့်အတွက် ရှောင်ပါ။ အလုပ်တွင် ထိတွေ့မှုရှိသော လူများသည် လုံခြုံရေးအတွက် မည်သို့လုပ်ရမည်ကို သင်တန်းများရရှိထားသင့်ပြီး၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများလုပ်သင့်သည်။
-ဖုန်၊ နှင့် အခြားသော ဓါတုဓါတ်ငွေ့များနှင့် ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မရှောင်နိုင်လျင် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ဝတ်ဆင်ပါ။
-ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အာဟာရကို စားသောက်ပါ။
-အသက်ရှူသည့် လေဖိအားတိုင်းတာခြင်းကို စစ်ဆေးရန် လိုမလို သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
-တုပ်ကွေးနှင့်နမိုးနီးယားရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။
-ချောင်းဆိုးကြာရှည်နေလျင်၊ အသက်ရှူရခက်နေလျင်၊ ရင်ဘတ်အောင့်လျင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ပြသဆွေးနွေးပါ။
မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရရှိနိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Warning Signs of Lung Disease. http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/warning-signs-of-lung-disease/?referrer=https://www.google.com.sg/. Accessed November 6, 2016
Lung disease fact sheet. https://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/lung-disease.html. Accessed November 6, 2016
Asthma. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/basics/definition/con-20026992. Accessed November 6, 2016
COPD. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/home/ovc-20204882. Accessed November 6, 2016
Lung cancer. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lung-cancer/basics/definition/con-20025531. Accessed November 6, 2016
အဆုတ်မှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါ အမျိုးမျိုး ။ ။
လက်သည်းခြေသည်းတွေက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေး ။ ။